Warka oo Video	Qarax weyn oo caawa gil gilay Magaalada Nairobi iyo khasaaro ka dhashay Nin goob caafimaad ku lahaa Magaalada Muqdisho oo ay caawa kaxeysatay Hay’adda Nabad Suggida Dhowr qof oo maanta lagu kala dilay Degmooyinka Gobolka Banaadir Dowladda oo soo afjartay shirkii ka soconaayay Muqdisho, xilli ay dilalka ku soo bateen Daawo Sawirada: Garoonka Aadan Cadde oo laga sameynaayo Dugsi lagu barto wadista diyaaradaha Al Shabaab oo maanta xoog loogala wareegay Xaruntii ay ka soo qaadi jirayn weerarada Degmada Buulo Burde Askari ka tirsan Ciidamada Dowladda oo maanta si xun loogu dilay Magaalada Muqdisho Ciidamada Dowladda iyo Amisom oo dagaal kula wareegay xadka Gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe Qaramada Midoobe oo wal-wal ka muujisay dilalka ka soo cusboonaaday Magaalada Muqdisho Baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in Xarakada Al Shabaab ay cadow ku tahay Soomaalida oo dhan News Video & Universal TV
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Tolwaaye | 23 04 2014
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Tolwaaye Published on Apr 23 2014 // News Video // 189 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Terra Published on Apr 22 2014 // News Video // 1389 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay SOMALI CHANNEL oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya. Published on Apr 21 2014 // News Video // 1414 Reads Wararkii maanta ka baxay Somali Channel oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Hani Published on Apr 20 2014 // News Video // 1546 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Ayaanle Published on Apr 19 2014 // News Video // 1510 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay SOMALI CHANNEL oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya. Published on Apr 18 2014 // News Video // 1532 Reads Wararkii maanta ka baxay Somali Channel oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Tolwaaye Published on Apr 17 2014 // News Video // 1551 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Tolwaaye Published on Apr 16 2014 // News Video // 1498 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay SOMALI CHANNEL oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya Published on Apr 14 2014 // News Video // 1738 Reads Wararkii maanta ka baxay Somali Channel oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Salmaan Published on Apr 13 2014 // News Video // 1604 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Ayaanle Published on Apr 12 2014 // News Video // 1732 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Tolwaaye Published on Apr 10 2014 // News Video // 1816 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Tolwaaye Published on Apr 09 2014 // News Video // 1646 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Terra Published on Apr 08 2014 // News Video // 1691 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Luul Published on Apr 07 2014 // News Video // 1699 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Hani Published on Apr 06 2014 // News Video // 1833 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Ayaanle Published on Apr 05 2014 // News Video // 1779 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Terra Published on Apr 01 2014 // News Video // 1780 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Salmaan Published on Mar 31 2014 // News Video // 1738 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Cabdulaahi Published on Mar 30 2014 // News Video // 1815 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Ayaanle Published on Mar 29 2014 // News Video // 1643 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Saalamiin Published on Mar 29 2014 // News Video // 1674 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Tolwaaye Published on Mar 27 2014 // News Video // 1781 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Tolwaaye Published on Mar 26 2014 // News Video // 1630 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Terra Published on Mar 25 2014 // News Video // 1696 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Hani Published on Mar 24 2014 // News Video // 1976 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Salmaan Published on Mar 23 2014 // News Video // 1684 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Ayaanle Published on Mar 22 2014 // News Video // 1801 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….
Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Saalamiin Published on Mar 22 2014 // News Video // 1729 Reads WARKA 21 03 2014 Shirka ururka shaqaalada aduunka oo uu ka qeyb galay Reysalwsaaraha Soomaaliya Daawo wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo guud ahaan Somaliya by Tolwaaye Published on Mar 20 2014 // News Video // 1671 Reads Wararkii maanta ka baxay Universal TV oo xiiso leh iyo dhacdooyinkii maanta ee guud ahaan Somaliya….